Kooxo hubeysan oo xalay weeraray Ergooyinka ku sugan Garowe – STAR FM SOMALIA
Inkastoo aan weerarkan geysan wax khasaare ah ayaa hadana dableyda weerarka ka dambeysay waxay beegsadeen mid ka mid ah Hotelada ku yaalla Garowe oo ay degan yihiin Ergada doorashooyinka iyo xarumo kale oo la dejiyay ergooyinka.
Wararka qaar ayaa sheegaya in weerarkan uu salka ku haayo cabasho mid ka mid ah beelaha dega Puntland ka keeneen qaabka loo xulay ergooyinka doorashada Aqalka hoose.
Mid ka mid ah Beelaha ayaa ku dhawaaqday inay isaga baxday doorashada Aqalka hoose, ayna la laabteen ergooyinkii u matali lahaa, kaddib markii ay sheegeen inay arkeen in loo maamulayo qaabka ay wax u dooranayaan.
Saraakiisha ammaanka ayaa wali ka hadlin weerarkan, waxaana Guddoomiyaha Gobolka Nugaal Cumar Faraweyne uu sheegay inay socdaan baaritaano la xiriira weerarka.
Ammaanka magaalada Garowe ayaa si aad ah loo adkeeyay, waxaana markii xalay la maqlay rasaasta ciidamo badan lagu soo daadiyay waddooyinka, kuwaasoo sugayay ammaanka.
Lama oga saameynta ay ku yeelan doonto weerarkii xalay lagu qaaday ergooyinka doorashada lagu wado inay maanta ka dhacdo magaalada Garowe.
Murano ku aadan hanaanka doorashada iyo habka loo xulayo ergooyinka ayaa ka taagan deegaanada qaar, waxaana dhowaan Baydhabo ka dhacay is rasaaseyn dhex martay Musharaxiin u tartamaya Xildhibaanada Aqalka hoose iyo dhacdo kale oo shalay mid ka mid ah ergooyinka uu toorey ku dilay mid kale oo ergada ka mid ahaa magaalada Kismaayo.
Qaramada Midoobay oo ka digtay khatarta Shabaab
Maxaabiis ku xiran Magaalada Cadaado oo Muqdisho loo soo wareejinayo